Jun 19, 2012 08:49
Dr. Prasarn Trairatvorakul, Governor of the Bank of Thailand (BOT), and Mr. Than Nyein, Governor of the Central Bank of Myanmar (CBM), today signed the Memorandum of Understanding (MoU) on technical cooperation between the two institutions to enhance the central banking capacity of CBM staff. This cooperation effort will not only support Myanmar’s socioeconomic and financial structural reform, but also contribute towards the ASEAN economic integration.
Jun 09, 2012 15:17
ရက်စွဲ၊ ၂ဝ၁၂ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ ၇ ရက်
မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်မှ တစ်သောင်းကျပ်တန် ငွေစက္ကူအမျိုးအစားသစ်ကို ၂ဝ၁၂ ခုနှစ် ဇွန်လ ၁၅ ရက် နေ့တွင် စတင်ထုတ်ဝေပါမည်။ ငွေစက္ကူသစ်ကို ပြည်သူများအား ဘဏ်ဖွင့်ချိန်အတွင်း မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ် ငွေကြေးဌာနတွင်လည်းကောင်း၊ ဘဏ်များနှင့် အစိုးရငွေတိုက်များတွင်လည်းကောင်း ထုတ်ပေးပါမည်။
Jun 05, 2012 05:24
မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်သည် ၁-၄-၂ဝ၁၂ ရက်နေ့မှ စတင်ပြီး နိုင်ငံခြားငွေလဲလှယ်နှုန်းပေါင်းစည်းခြင်းလုပ်ငန်း ၏ ပထမခြေလှမ်းအဖြစ် ထိန်းကျောင်းမှုရှိသည့် နှုန်းရှင်ငွေလဲလှယ်နှုန်းစနစ်ကို စတင်ကျင့်သုံးခဲ့ပြီး ပြည်တွင်းပုဂ္ဂလိကဘဏ် ၁၇ ဘဏ်ကိုလည်း နိုင်ငံခြားငွေများ ဝယ်ယူရောင်းချလဲလှယ်ခွင့်လိုင်စင်များ ထုတ်ပေး ခဲ့ကြောင်း၊ မြန်မာနိုင်ငံ အတွင်း နိုင်ငံ ခြားသားများ၊ ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသည်များ၊ ပြည်တွင်းနေ နိုင်ငံသားများ နိုင်ငံခြားသုံးငွေများ လွယ်ကူအဆင်ပြေစွာ စနစ်တကျ လဲလှယ်သုံးစွဲနိုင်စေရန် ဘဏ်များ၊ လေဆိပ်များ၊ ဟိုတယ်များ၊ ဈေးဝယ်စင်တာများနှင့် ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသည်များ အများဆုံး သွားရောက်နိုင်သည့် နေရာများတွင် နို
Auction Result for 18.9.2017
Activities of Interbank Foreign Exchange Market for 15.9.2017
Auction Result for 15.9.2017
Activities of Interbank Foreign Exchange Market for 14.9.2017
Auction Result for 14.9.2017